Mahathir Habiskan Sisa Usianya Dengan Terus Menaburkan Fitnah
Fishy story behind the fire incident indicate the likelyhood of Arson attack
၉၆၉ အကြမ်းဖက် ဂိုဏ်းသားများ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည်သူ့ရဲ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် လှုပ်ရှားနေ
Deadly riots in central Myanmar
ဠင်းတ ၆ ကောင် ဘယ်မလဲ? ၀ီရသူနှင့် ဓမ္မန္တရာယ် ၉၆၉ ဂိုဏ်း
ESSCOM ERROR......1 APRIL JOKE!!!!!!!
Shhhh, Don’t Tell Anyone Hamas won by By Andrew C. McCarthy
Is this look like short-circuted and burnt transformer
Eight Justifications of Greedy Capitalists
President office Director Hmuu Zaw is regularly sharing from 969 Neo-Nazi Movement leader skin-head monk Wira Thu’s FB
Why You Should Take Chia Seeds
Nampaknya bekas perdana Menteri Tun Dr. Mahathir terus melakukan fitnah dan seolah-olah beliau ingin menghabiskan sisa-sisa usianya dengan menabur fitnah.
Terbaru di dalam akhbar Kosmo, beliau mendakwa bahawa Menteri besar Kelantan,YAB TG Nik Abdul Aziz Nik Mat telah menyambut hari jadi bersama Karpal Singh., dan Nik Aziz, tuduh beliau, telah meniup lilin.
Sedangkan apa yang sebenarnya berlaku ialah TG Nik Aziz hanya memenuhi jemputan ke rumah Karpal Singh. Beliau telah dihidangkan sebuah kek. TG Nik Aziz hanya melakukan belahan kek dengan menggunakan pisau DAN TIDAK ADA SEBARANG UPCARA TIUP LILIN seperti yang didakwa oleh Tun Mahathir.
Sungguh dasyat fitnah Mahathir terhadap TG Nik Aziz.
Sedangkan beliau sendiri tidak sedar atau pura-pura tidak sedar anaknya menguasai syarikat arak terbesar di Asia, San Miguel. Mengapa hal itu tidak pernah beliau ulas dan berikan penjelasan?
Sudahlah hipokrit, memfitnah pula.
Posted: 02 Apr 2013 07:36 AM PDT
截至2012第三季，經營效率最好，全球產量第四的銀礦公司Pan American Silver的白銀生產成本是19.73美元一盎司。雖然多數金銀礦公司沒有在財報中披露真實的生產成本，可從年報中估算，以白銀為主的全部礦產公司的平均成本估計約24-25美元一盎司。黃金和白銀價格的上漲並非炒作，背後是有真實的成本推動因素支持的，金銀價格並沒有出現遠遠拋離成本的引力範圍之外。
Posted: 02 Apr 2013 06:31 AM PDT
"M-Media could interview two 15-year-old students who had escaped from the burning: "Our school is two-storeyed. We didn't know that it was on fire at first. When we realized that the fire had spread. We ran down the staircase, and we slipped on the oil spilled on the floor. There are about 70 students in our school for the time being. Now (at the time of the interview) 51 students have escaped. The school didn't store any flammables like gasoline or petroleum. The fire started from the shoe cabinet. Our shirts still smell the gasoline now."
"I am now at the burnt place. Fire didn't catch the mosque, it was only inside the school. Three fire engines got here and put out fire. Children who were burnt were found together at one place. To my surprise, one of them didn't catch fire at all but died, and one more thing, as they all were supposed to be asleep in their bed, I cannot understand why they all were burnt to death at one place together. Now, the reason of the fire was told to be wire-shock. Indeed, it cannot be. I talked to people who live in that street, and they told me they heardaloud banging sound two hours before, but they didn't pay attention to where it came from. Later, they said they saw fire from the school, for that at first they thought it was only candlelight, and only sooner they learnt the school was on fire. Now the dead bodies have been taken to the hospital, and those who had escaped were put inacamp. I am sure it was not wire-shock, it was definitely arson", saidawitness from the fire-spot to M-Media."
Afteravery tiring day thanks to the heat wave in Penang and meandering my way through the traffic congestion, I finally settled down in front of my computer screen withasmall bowl of peanuts -alittle treat after one month's abstinence. When I clicked into The Malaysian Insider, lo and behold, I nearly choked on my peanuts when I read THIS ARTICLE -aclassic case of unabashed hackneyed self-glorification.
It is common knowledge that long time political parties haveatendency to projectapolitical narrative of their history, mission, vision, events, achievements and aspirations. But to issueareport card and then to give itself top marks not forgetting taking credit for various developments?
The report card will be used as part of the party's campaign in Election 2013 and comes in an A2 size format listing MCA's contributions on the left while rivals the DAP and PKR's are on the right.
Virtually all of the space given to the opposition in the report card says "no contribution". CLICK HERE for more.
I have not seen the report card but I do wonder if many of the claims and/or conclusions are nauseatingly trite, simplistic and exaggerated. A self-serving report card would beastumbling block in listening to citizens' concern/issues.Easy - deny by making high falluting claims.
Such weak and banal efforts fall flat. Would you regard it asasincere and honest report? I wonder if they realize how such overtures are driving people further and further away while they rejoice at the pinnacle of political demagogy.
This report reminded me of what I learnt decades ago in varsity about the political phenomenon - cult of personality which has been used by many politicians, including Stalin and North Koreans.
"A cult of personality arises when an individual uses mass media, propaganda, or other methods, to create an idealized, heroic, and, at times god-like public image, often through unquestioning flattery and praise.
Sociologist Max Weber developedatripartite classification of authority; the cult of personality holds parallels with what Weber defined as "charismatic authority".
A cult of personality is similar to hero worship, except that it is established by mass media and propaganda."
To put things into perspective, I wish to draw your attention to this fantastic article from BBC by Lucy Williamson, Delving into North Korea's mystical cult of personality:
North Korean media has used emotive language to encourage loyalty to Kim Jong-il
There isadifference though between Kim and Chua. The former could fall back on "the power of his lineage, and the personality cult created by his country's unique cultural machine." What about Chua?
Is the sun setting for MCA or is it undergoingametamorphosis?
It will be interesting to see how MCA performs in the next GE. If they do well, they can frame this 'report card'.
And if they don't, I wonder what will they do with this report card?
Do leaveamessage to share your thoughts.
Posted: 02 Apr 2013 06:12 AM PDT
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ – ကိုမင်းဇေယျာ ရန်ကုန် – မတ်လ ၃၁
Myanmar Police Motor Cycle with Buddhist Terrorist group logo 969
ရန်ကုန်မြို့တွင် ၉၆၉ အကြမ်းဖက် ဂိုဏ်းသား အချို့သည် ပြည်သူ့ရဲ ဆိုင်ကယ်များကို အသုံးပြုပြီး ၉၆၉ တရားခွေများ စတေကာများ လိုက်လံ ဝေငှလျက် ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
လွန်ခဲ့သည် မတ်လ၂၉ ရက် သောကြာနေ့က ရန်ကုန်မြို့ မြယာကုန်းလမ်း ဗလီ အရှေ့ရှိ ရွှေလဘက်ရည်ဆိုင် အရှေ့တွင်ရပ်ထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား မောင်းနှင်သူမှာ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမဟုတ်ပဲ ဒေါပုံဖက်က လူမိုက်အောင်ကိုဦး ဆိုသူဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် သာကေတမြို့နယ် တစ်ဝိုက် မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးရေး ၀ါဒဖြန့်သူများအနက်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သာကေတ အစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်း ဖျက်ဆီးမှုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်များက သတင်းပေးပို့ ပါသည်။
အဆိုပါကဲ့သို့ နိုင်ငံတော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအား တာဝန်ယူထားသော ပြည်သူရဲ များ ၏ ဆိုင်ကယ်များတွင် အစွန်းရောက်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်၏ စတေကာများကို ကပ်ထားခြင်းကြောင့် ပြည်သူများ စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အပေါ်အယုံအကြည်များ ပိုမိုလျော့နည်း လာနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့ရဲ တပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် အုပ်စု တစ်စု၏ အသုံးချခံ မဖြစ်သင့်ကြောင်းနိုင်ငံသားအားလုံး၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များကို အကာအကွယ် ပေးရမည့် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပိုမိုပီပြင်လာစေရေးအတွက် အထူးလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း မြယာကုန်းလမ်းရှိ ပြည်သူတစ်ဦးမှ
`အခု ဒီမှာ ဒုက္ခသည်တွေ ရောက်နေတယ်လေ … ဒီရဲဆိုင်ကယ်ကြီးက ၉၆၉ တံဆိပ်ကြီးတပ်ပြီး အရှေ့တည့်တည့်က လာရပ်ထားတယ် …. သာကေတက ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေက ပြောပြတယ် ဒီလူက သာကေတလူမိုက်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ရဲဆိုင်ကယ်ကြီးစီးလာလဲ မသိဘူး …. ဒီလိုဆိုယင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူ့ကို အားကိုးရမလဲ … ရဲက လည်း ၉၆၉ တံဆိပ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွေကို လာဖျက်တဲ့ သူတွေကလဲ ဒီလူတွေပဲ ဆိုတော့ ….. ဒုက္ခပဲပေါ့
ဟု myanmarmuslim.net သို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted: 02 Apr 2013 05:56 AM PDT
Wira Thu led 969 Hate group had instigated, started and executed the RELIGIOUS CLEANSING in Meikthila.
Posted: 02 Apr 2013 06:02 AM PDT
ဠင်းတ ၆ ကောင် ဘယ်မလဲ? ၀ီရသူနှင့် ဓမ္မန္တရာယ် ၉၆၉ ဂိုဏ်း By အောင်ဆန်းဝိညာဉ်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပေါ် ဠင်းတ ၆ ကောင်တက်ခဲ့ပြီ။ ရွှေတိဂုံဟူသည် မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ ဠင်းတဟူသည် အသေကောင်၊ အပုပ်ကောင်ကိုသာ စား၏။ ယင်းနိမိတ်ကား ၆ နှင့်ဆိုင် သော အခင်းအကျင်းကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ပျက်ကြောင်းတရားဖြစ်၏။ စစ်မှန်သော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ တည်တံ့ရေးအတွက် ယင်း ၆ မျိုးသော အန္တရာယ်များကို အမြန်ဆုံးအရေးယူရန် လိုအပ် နေပါသည်။ ယင်းတို့မှာ …
1. ဦးဝီရသူဦးဆောင်သော သာသနာဖျက်ဘုန်းကြီးတစ်စု
2. အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် အတ္တကိုအခြေပြုပေါ်ပေါက်လာသော ၉၆၉ ဂိုဏ်း
3. တရုတ်အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်နေသော ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့် သူ၏ သာသနာ့နုဂ္ဂဟ အသင်းများ
4. အထက်ပါ ၃ ချက်ကို ပံ့ပိုးနေသော ဦးခင်ရွှေကဲ့သို့ခရိုနီများ
5. အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
6. ယင်းသာသနာဖျက်လုပ်ငန်းများကို လစ်လျူရှုနေကြသည့် သံဃမဟာနာယကအဆင့်ဆင့်၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
၁။ ဦးဝီရသူဦးဆောင်သူ သာသနာဖျက် ဘုန်းကြီးတစ်စု (၀ါ) ဠင်းတအမှတ်(၁)
မြတ်ဗုဒ္ဓက "သံကို သံချေးက ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့ ငါ့သာသနာကိုလည်း အလဇ္ဈီရဟန်းတို့က ဖျက်ဆီးကြလတ္တံ့" ဟု ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဦးဝီရသူဦးဆောင်သော အလဇ္ဈီရဟန်းတစ်စု၏ သာသနာ ဖျက်လုပ်ငန်းများကို လေ့လာသုံးသပ်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှ ဦးဝီရသူသည် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားစေသော စာရွက်စာတမ်းများဖြန့်ဝေခဲ့ပြီး ကျောက်ဆည်မြို့၌ မူစလင်-ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေခဲ့မှုကြောင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။
မူစလင်တို့က သံဃာတော်တစ်ပါးကိုသတ်သည်ဟု ၀ါဒဖြန့်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် သေကြေပျက်စီးမှုများစွာ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့်လွတ်မြောက်လာပြီး ထောင်တွင်းအတွေ့ အကြုံများအရ မူစလင်တို့ကောင်းကြောင်းပြောဆိုကာ ၂၀.၁.၂၀၁၂ နေ့က မန္တလေးမြို့၌ကျင်းပခဲ့သော ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ရာ ရဟန်း ရှင်လူအားလုံး သာဓုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် အစ္စလာမ်ဘာ သာနှင့် မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းတစ် လျှောက်လုံးတွင် အစွန်းရောက်ရခိုင်-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပြဿနာကိုကြီးထွားရန်၊ ပြည်ပသို့ ကူးစက်လာစေရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထေရ၀ါဒ ဆရာတော်ကြီးများက မထောက်ခံ၍ မအောင်မြင်ခဲ့။ မစ္စတာကင်တားနားနှင့် ကုလသမဂ္ဂ၊ NGOများ ရခိုင်သို့လာရောက်ခြင်းကို ကန့်ကွက်စေခဲ့သည်။ မည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေးမလွှမ်းမိုးစေဘဲ အချုပ်အနှောင်မဲ့အကူအညီပေးနေသော OIC (အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့)ကိုလည်း မဟုတ်မမှတ် လုပ်ကြံဇာတ်များခင်း၍ ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်မှာ စီးပွားပျက်ပြီး ရခိုင်များပင် ပြည်မနှင့် နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ခွာ နေကြရသည်။ သူ့လုပ်ငန်းကိုမထောက်ခံသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD အဖွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ မင်းကိုနိုင် ကိုလည်းကောင်း ရှုတ်ချစကား ပြောကြားသေးသည်။
၀ီရသူသည် မြန်မာပြည်အနှံ့မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်သွေးကြွတရားများ ဆက်လက် ဟောကြားခဲ့ရာ ဖြူး၊ မုတ္တမ၊ မော်လမြိုင်နှင့် ဖားအံ့ဝန်းကျင်တို့၌ သာသနာဖျက်လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်ပွားများ ရရှိလာကာ ယခုအခါ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်အတ္တကိုအခြေပြုသည့် ၉၆၉ ဂိုဏ်း ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။
၂။ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် အတ္တအခြေပြု ၉၆၉ ဂိုဏ်း (၀ါ) ဠင်းတ အမှတ်-၂
မြတ်ဗုဒ္ဓက "ချစ်သားအာနန္ဒာ၊ ငါဘုရားဟောကြားထားသော ဓမ္မ၀ိနယ ခေါ် သုတ်၊ ၀ိနည်းနှင့် အဘိ ဓမ္မာတရားတော်သည် ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါ အသင်တို့၏ဆရာဖြစ်သည်"ဟု ဟောကြားတော် မူခဲ့ပါသည်။ ယခု ၀ီရသူနှင့် ၉၆၉ ဂိုဏ်း၏ အတွေးအခေါ်နှင့် လုပ်ရပ်များကိုကြည့်လျင် ဗုဒ္ဓ၏ သစ္စာတရား ၄ ပါး၊ ကမ္မဌာန်းတရား ၄၀ နှင့် ဗြဟ္မစိုရ်တရား ၄ ပါးတို့နှင့် လုံးဝ အပ်စပ်ခြင်းမရှိသည့်ဂိုဏ်းအသစ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရ ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ၀ီရသူသည် ရဟန်းသိက္ခာပုဒ် ၂၂၇ အနက် ကျူးလွန်မိက ပြန်ကုသ၍မရသော "ပါရာဇိက"သိက္ခာပုဒ် ၄ ပါးအနက် သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးယူမှုနှင့် လူသတ်မှု၊ သေအောင်လှုံ့ဆော်မှုဟူသော သိက္ခာပုဒ် ၂ ပါးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်လျက်ရှိနေပါသည်။ ပရိသတ်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားရာ တွင်လည်း ထိပ်ဆုံး၌ ရှိနေပါသည်။
၉၆၉ ဟူသော ဂဏန်း၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ ပါး၊ တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါးနှင့် သံဃာ ဂုဏ်တော် ၉ ပါးကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ၀ီရသူနှင့်အပေါင်းအပါများကဆိုသော်လည်း လက်တွေ့တွင် မူဆလင်တို့၏ ၇၈၆ ဂဏန်းကိုတုပ၍ မုန်းတီးရေးဖန်တီးကာ လူသေစေအောင်လှုံ့ဆော်သော သင်္ကေတဖြစ်နေ ပါသည်။ (၉+၆+၉ =၂၄) (၂+၄=၆) ဖြစ်ရာ ၉၆၉ ဂဏန်းကို ဗုဒ္ဓသာသနာအလံတော်ပေါ်တင်လိုက်ခြင်းမှာ ထေရ၀ါဒ သင်္ကေတ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပေါ်သို့ ဠင်းတ ၆ ကောင် တက်စေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ အလံတော်ပေါ်တွင် ၉၆၉ တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားသော အဆောင်အယောင်များမှာ သာသနာဖျက်ရာ အမင်္ဂလာ တံဆိပ်ဖြစ်၍ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၉၆၉ ဂဏန်းကို ယခင်ကလည်း မသုံးစွဲခဲ့၊ ၀ါရင့် ထေရ ၀ါဒသံဃာတော်များနှင့် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကလည်း အသိအမှတ်မပြုကြပါ။
ဦးဝီရသူနှင့်အပေါင်းအပါတစ်စုက မူဆလင်တို့၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်နှင့် ဗလီများကို တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးရန် မိမိတို့၏နောက်လိုက်တို့အား ဘုရားလောင်းကြွက်မင်းက မြေခွေးကိုတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်သည့် နိပါဌ်တော်ကို လွဲမှားစွာ ကိုးကားသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် မူစလင်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဗမာ လူမျိုးအကျိုးဖျက်ဆီးနေသော မြေခွေးသဖွယ် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဇာတ်များ ခင်းကျင်းလေ့ကျင့်ပေးနေ ပါသည်။ မူစလင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့၏ လောကီပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းရမည့်အစား လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေးအသွင်ပြောင်း၍ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဥပမာ… သူလင် သူမယား ကြိုက်၍ယူထားကြပြီး ပြဿနာတက်သောအခါ မူစလင်တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများကို စော် ကားနေသည်ဟုလည်းကောင်း၊ ဈေးအရောင်းအ၀ယ်အမှားဖြစ်ပါက မူဆလင်တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများကို စော်ကားပြီဟုလည်းကောင်း ပုံကြီးချဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မူဆလင်ဆရာများ၏ ရှင်းလင်းချက်အရ သိရသည်မှာ ၇၈၆ ဟူသောဂဏန်းကို အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရဗီစာပေ မကျွမ်းကျင်သော မူဆလင်တို့ကသာ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ကမ္ဘာ့ မူဆလင်တို့က မသုံးစွဲကြောင်း၊ ယင်းဂဏန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ကိုရန်ကျမ်းစာ၏ ပထမဆုံးအဖွင့်ဗျာဒိတ်တော် ဖြစ်သည့် "မဟာကရုဏာတော်ရှင်၊ အနန္တကောင်းချီးကရုဏာတော်ရှင်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ဖြင့် အစပြုပါ၏"ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် စာသားကိုရည်ညွှန်းပြီး ယင်းဝါကျတွင် အာရဗီဗျည်းအက္ခရာ ၁၉ လုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားရာ ယင်း ၁၉ လုံး၏ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်များကိုပေါင်းရာ ၇၈၆ ရရှိခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ ခွန်ရှစ်ခြောက် မဟုတ်ကြောင်း၊ ၂၁-ရာစုတွင် သာသနာပြန့်အောင်ပြုရန် ညွှန်ကြားချက်မဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းဂဏန်းကို မူလဆင် တို့၏ အစားအသောက်ဆိုင်များ၌သာ အများဆုံးတွေ့နိုင်ကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ အသားဟင်း ချက်ပြုတ်စားသုံးရာတွင် ကိုရန်ကျမ်းစာအရ ပညတ်ချက်များရှိရာ ယင်းသို့ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နည်းမှာ မူဆလင် အချင်းချင်းသာသိရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အသားဟင်းစားသုံးမည့်မူဆလင်တို့သည် ၇၈၆ သို့မဟုတ် HALAL ဟု ရေးထားသောဆိုင်များ၌သာ စားသုံးနိုင်ကြောင်း၊ အခြားပစ္စည်းများဝယ်ယူစားသုံးရာတွင် မူဆလင်တို့သည် လူမျိုး၊ ဘာသာဆိုင်မရွေးဘဲ ၀ယ်ယူကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့သော် ဦးဝီရသူနှင့် အပေါင်းပါတို့က ၇၈၆ ဟူ သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆန့်ကျင်ဖျက်ဆီးရေးဂဏန်းဟု လူထုကို လွဲမှားစွာသင်ကြား၍ မူဆလင်တို့နှင့် ဗလီများကို တိုက်ခိုက်စေခြင်းမှာ ပါရာဇိကကံ ထိုက်နေပါသည်။
၉၆၉ ဂိုဏ်းသားတို့က အမျိုး ဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရာတွင် အောက်မြန်မာပြည်တွင် ရွှေည၀ါ၊ အထက်မြန်မာပြည်တွင် ၀ီရသူသာ ရှိပါသည်ဟူ၍ အခြား ထေရ်ကြီး ၀ါကြီး ဆရာတော်ကြီးများကိုပင် ပြစ်မှား ပြောဆိုလာခဲ့ကြပါသည်။ ဘားအံ့မြို့ပေါ်မှာ သံဃာအချို့ လူပေါင်းမှားပြီး မူစလင်တို့ကို သပိတ်မှောက် ဆန့်ကျင်ရေးကြေငြာချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး စီးပွားရေးကမောက်ကမ ဖြစ်သွားခဲ့ပါ သည်။ ဘားအံ့မြို့ပေါ်သို့ ရွာမှလာရောက်သော အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီး မျက်စိအမြင်မကောင်းသည့် မူစလင်အဘိုးအိုတစ်ဦးမှာ နံနက်စောစောတွင် ဆွမ်းခံသံဃာတန်းကြီးခေတ္တအပြတ်၌ ဖြတ်ကူးမိသဖြင့် ဗုဒ္ဓ သားတော်ဆိုသူ သံဃာတစ်သင်းက လမ်းမပေါ်၌ပင် အသေ၀ိုင်းရိုက်ကြရာ အပြစ်မဲ့အဘိုးအိုမှာ ဆေးရုံပေါ် တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာ ကရင်ပြည်နယ် ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်း၌ ဖျက်မရသော အစွန်းကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သင်္ကန်းဝတ်ဘုန်းကြီးများမှာပင် လူစိတ်ပျောက်နေပြီဖြစ်ရာ လူဝတ်ကြောင် ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားများ မည်မျှ ဘီလူး စိတ်ပေါက်နေပြီဆိုသည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ သာသနာဖျက်၊ တိုင်းပြည်ဖျက်လုပ်ငန်းများ လွန်ကဲ လာရာ (KNU) ကရင်ခရစ်ယာန်များက လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် မူဆလင်ရွာများကို ထိပါး ပါက ၎င်းတို့ကြည့်နေမည်မဟုတ်ဟု ရာဇသံပေးရသည့်အဆင့် ရောက်လာမှ ရှေ့မတိုးရဲဘဲ ရှိသွားပါသည်။ မွန် ပြည်နယ်၌ ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားတို့၏လုပ်ငန်းကို ထေရ၀ါဒကိုယ်တော်အများစုက လက်မခံ၍ မအောင်မြင်ဘဲ ရှိနေ သည်။ သို့သော်မုတ္တမမြို့၌ သင်တန်းကျောင်းဖွင့်ကာ မွန်လူငယ်များကို မူဆလင်မုန်းတီးတိုက်ခိုက်ရေးသင် တန်းများ ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။ မကြာခဏ လူအုပ်ဖြင့် မူဆလင်များကို ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိနေပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားတို့ဒ အဖျက်လုပ်ငန်းမှာ ရန်ကုန်၊ သာကေတ၊ လှိုင်သာယာ မှတဆင့် မိတ္ထီလာ မြို့သို့ရောက်ရှိသွားပြီး ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းမြို့များသို့ ကူးစက်သွားခဲ့ပါသည်။ ဦးဝီရသူဟာ ရုပ် ပိုင်းဆိုင်ရာမပေါ်လွင်တဲ့ Gay တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ နူးညံ့လွန်းခြင်းနဲ့ ကြမ်းကြုတ်လွန်းခြင်း အစွန်း နှစ်ဘက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီက ဟစ်တလာလိုပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် personality နှစ်ရပ်ကို မန္တလေး အခမ်းအနားနဲ့ မိတ္ထီလာအရေးအခင်းမှာ မယုံကြည်လောက်အောင် တအံ့တသြတွေ မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ၁၉.၃.၂၀၁၃ နေ့က မန္တလေးမြို့ Oriental House မှာ မန္တလေးဝါရင့်သံဃာအပါး ၅၀ လောက်ဦးဆောင်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးအခမ်းအနားတစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး ကို မလိုလားတဲ့ဦးဝီရသူဟာ ပွဲမစမီ ခန်းမထဲမှာ မူဆလင်ဆန့်ကျင်မုန်းတီးရေးစာအုပ်များကို ဝေစေခဲ့ပြီး ခန်းမ ပြင်ပမှာလည်း ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားတချို့ လာရောက်စေပြီး ပွဲဖျက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ါရင့်သံဃာတော် ကြီးတွေရဲ့ ဦးဆောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကြောင့် အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ရဟန်း ရှင်လူ အားလုံးရှေ့မှာ၊ မြိ့ပေါ်မှာ ၀ီရသူရဲ့ စိတ္တဇရောဂါကို စတင်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ မိတ္ထီလာအရေးအခင်းရက်များမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပါရာဇိကကံထိုက်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုဟာ အမြင့်ဆုံး ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။
၂၀-၃-၂၀၁၃ မနက်ပိုင်းမှာ မိတ္ထီလာမြို့ရဲ့ မူဆလင်ပိုင်ရွှေဆိုင်တစ်ခုမှာ ရွှေလာရောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်တစ်ဦးတို့ အချင်းများ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့လို့ ရဲက ဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်လို့ ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် နေ့လည်မှာ ၉၆၉ ဂိုဏ်းဝင်မိန်းမနှစ်ဦး ရွှေဆိုင်ရှေ့ရောက်လာပြီး မနက်ကရွှေရောင်းသူဟာ သူမတို့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စကိုမကျေနပ်ကြောင်း လူအုပ်နဲ့ပြဿနာရှာဖန်တီးပြီး ရွှေဆိုင်နဲ့အိမ်အချို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒီမှာလည်း ကိစ္စပြီးသွားပေမယ့် ဦးဝီရသူက ကျောက်ဆည်အရေးအခင်းကပုံစံအတိုင်း မူစလင်တွေ ဟာ သံဃာတစ်ပါးကို ဗလီထဲဆွဲခေါ်သွားပြီး အက်ဆစ်လောင်းကာ မီးရှို့သတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး ၀ါဒဖြန့်ချိကာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်လာအောင် လူတွေသေစေအောင် လှုံ့ဆော်မှုပြုပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ Facebook ထဲမှာ လက်ပံတောင်း တောင်အရေးအခင်းတုံးက ဗုံးထိပြီး မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေ့ရထားတဲ့ သံဃာတစ်ပါးရဲ့ ဓာတ်ပုံကို အခု မိတ္ထီလာမှာ သတ်ခံရတဲ့ သံဃာတော်ရဲ့ဓာတ်ပုံဆိုပြီး လိမ်လည်လှည့်ဖျားကာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိမ်လည်မှုကိုသိတဲ့ ဒကာတစ်ပါးက Face book ထဲမှာ ဦးဝီရသူကိုဘာလို့ ဒီပုံကိုထည့်ရတာလည်းလို့မေးတဲ့ အခါ ဓာတ်ပုံမရလို့ ရှိတဲ့ပုံတင်လိုက်တာ ၊ ဘာပြဿနာရှိလို့လဲဆိုပြီး ၀ီရသူက အရှက်ကင်းမဲ့စွာ ပြန်ပြောထား တာကိုလည်း တအံ့တသြ ဖတ်ရှုကြရပါတယ်။
စိတ္တဇလူသတ်သမား ဦးဝီရသူရဲ့ ဒီလိုလိမ်လည်လှည့်ဖျားတာကိုမသိတဲ့ လူအုပ်ကြီးဟာ ဒီဓာတ်ပုံ ကြည့်ပြီး ဒေါသမထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ ၂၁.၃.၂၀၁၃ နေ့မှာ မိတ္ထီလာမှာရှိတဲ့ ဗလီ ၁၅ လုံး၊ မူဆလင်တို့ရဲ့အိမ်တွေ၊ ဆိုင်တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မီးလောင်မှုကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်အချို့လည်း မီးထဲပါသွားခဲ့ပါ တယ်။ုအဲဒီအချိန်မှာ တောင်ကုတ် (ရခိုင်)မှာတုံးက အကြမ်းဖက်ခဲ့ကြတဲ့ ဦးအောင်သောင်းရဲ့လက်မရွံ့အကြမ်း ဖက်သမားတွေနဲ့ ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားတွေကို အချိုကရည်ထဲမှာ မူးယစ်ဆေးထည့်တိုက်ခဲ့လို့ လူစိတ်ပျောက်ကုန်ပြီး တွေ့တဲ့မူစလင်တွေကို ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေးမရှောင်တော့ဘဲ ခေါင်းတွေဖြတ်၊ လည်လှီး၊ ခြေဖြတ်၊ လက် ဖြတ်ပြီး အလောင်းတွေကိုမီးနဲ့ရှို့၊ အလောင်းဖျောက်တာတွေကို သွေးအေးအေးနဲ့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မင်္ဂလာ ဇေယျုံမှာရှိတဲ့မူစလင်ကျောင်းသတ်ဖြတ်မှုဟာ အဆိုးဆုံးပါပဲ။ စိတ္တဇလူသတ်ကောင် ဦးဝီရသူဟာ အဲဒီ ကျောင်းထဲဝင်သွားပြီး ရဲတွေရောက်လာပြီဖြစ်လို့ လုံခြုံပြီး အသက်မသေချင်ရင် လက်အုပ်ချီပြီးထွက်ခဲ့ကြဆိုပြီး အဓမ္မသူ့ကို ရှိခိုးခိုင်းပါတယ်။ အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်း ကလေးကျောင်းသား ၁၀၀ လောက်နဲ့ ဆရာ ၄ ဦးကို ရဲတွေကြားထဲကနေ မိတ္ထီလာကန်ဘောင်ဘက်ခေါ်သွားရင်း ရဲတွေရှေ့မှာပဲအကြမ်းဖက်သမားတွေက အပြစ်မဲ့ကလေးတွေကို ခေါင်းဖြတ်၊ လက်ဖြတ်၊ ခြေဖြတ် သတ်လိုက်တာ ကလေး ၂၄ ဦးနဲ့ ဆရာ ၄ ဦး ရက်ရက် စက်စက် သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရွှေည၀ါဆရာတော်ရောက်လာပြီး ၉၆၉ မပါတဲ့ မူရင်း သာသနာ့အလံတော်နဲ့တားပြီး ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး သတ်ဖြတ်နေမှုကိုတားလိုက်လို့ ကျန်ကလေးတွေ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုကြီးကို ဦးဝီရသူဟာ သူ့ရှေ့ မှာပဲ သွေးအေးအေးနဲ့ ပြုလုပ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတွေ၊ လူသက်သေတွေ အမြောက်အများ ရှိနေပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ သူဟာ သူ့ရဲ့ ပါရာဇိက ကံထိုက်တဲ့ အိုးအိမ်ပျက်စီးစေမှု၊ လူသေစေမှုကို ဖုံးကွယ်ချင်လို့ မူဆလင်တွေက သံဃာကိုသတ်လိုက်လို့ ဒါတွေဖြစ်တာ၊ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးလုပ်ရမယ်ဆို ပြီး သံကောင်းဟစ်နေပါတယ်။
၃။ တရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်နေကြသော ဦးခင်ညွန့်နှင့် သာသနာ့နုဂ္ဂဟအသင်းများ (၀ါ) ဠင်းတ အမှတ်(၃)
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဦးခင်ညွန့်ထောက်လှမ်းရေးကိုင်စဉ်က နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဆိုက်ရောက် တိုင်း မူဆလင်-ဗုဒ္ဓဘာသာအဓိကရုဏ်းများ နှစ်စဉ်ဖန်တီးပြီး လမ်းကြောင်းပြောင်းလေ့ရှိခဲ့တာ လူတိုင်းအသိပါ။ အခု လည်း တရုတ်ရဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးကို လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံက မြန်မာဆိုတဲ့အသိနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းဆန္ဒပြ ခဲ့ကြလို့ တရုတ်အစိုးရရော၊ မြန်မာအစိုးရပါ တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအခါမှာ တရုတ်အစိုးရနဲ့ တရုတ်စီးပွား ရေးသမားတွေက သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး ဦးခင်ညွန့်ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မြန်မာလူထုရဲ့ဒုတိယဦးတည်ချက်က ကျောက်ဖြူဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းနဲ့ အခြား တရုတ်အကျိုး စီးပွားဘက်လှည့်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဦးခင်ညွန့်ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ အခြားဒေသတွေမှာ သာသနာ့ နုဂ္ဂဟအသင်းတွေ အမာခံတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအသင်းတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးလို့ ဘန်းပြထားပေမယ့် တရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ အထောက်အပံ့ကိုလည်း ကောင်းစွာခံစားကြရပါတယ်။ ဦးခင်ညွန့် ရခိုင်သွားပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း တောင်ကုတ်မှာ အပြစ်မဲ့မူဆလင် ၁၀ ဦးကို အကြမ်းဖက် ၃၀၀ လောက်က ဆွဲချပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ် ဖြတ်မှုပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တောထဲမှာ လူမမြင်ဘဲဖြစ်တဲ့မုဒိမ်းမှုအတွက် တရားခံ ၃ ဦးဖော်ခဲ့ပေမယ့် မြို့လည်ခေါင် လူအများရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ လူသတ်တရားခံတစ်ဦးမှ မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဖက်သတ်အသတ်ခံရတာကို ရုန်းရင်းဆန် ခတ်မှုဆိုသုံးပါသေးတယ်။ မီဒီယာတွေကတဆင့် မူစလင်ကုလားတွေဆိုပြီး အမုန်းစိတ်ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါ တယ်။ ဒီနောက် ရခိုင်အရေးအခင်းကြီး ဖန်တီးခံရပါတယ်။ နစ်နာသွားတာကတော့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာရော၊ မူဆလင်တွေပါဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်ညွန့်ဟာ သူ့ရဲ့ တရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ၀ီရသူနဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်တို့ကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းစွာ ထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအ၀င် နေရာတွေကိုသွားပြီး သူ့ရဲ့ သာသနာနုဂ္ဂအသင်းတွေကတစ်ဆင့် ၀ီရသူနဲ့ ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားတွေက မူဆလင်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်အောင် အခင်းအကျင်း တွေ ကြိုတင်စီမံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာပြည်မှာ ထေရ၀ါဒ ပျက်ရာပျက်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ၀ီရသူနဲ့ ၉၆၉ ဂိုဏ်း၊ ဦးခင်ညွန့်နှင့် သာသနာ့နုဂ္ဂအသင်းတွေကို ထောက်ပံ့နေတဲ့ ခရိုနီဦးခင်ရွှေနှင့် အပေါင်းအပါများ (၀ါ) ဠင်းတအမှတ် (၄)
ခရိုနီ ဦးခင်ရွှေလိုလူတွေကတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ သူတို့နဲ့ တရုတ်အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်မယ့်ဥပဒေ တွေမပေါ်ရေး ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အရပ်ထဲမှာတော့ ခင်သုံးခင်လို့ခေါ်တဲ့ ခင်ညွန့်၊ ခင်ရီ၊ ခင်ရွှေ နာမည် ကြီးပါတယ်။ ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီအနေနဲ့တော့ ဠင်းတတွေဘက်ပါမလား….လူထုဘက်ပါမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးအာဏာနဲ့ မူစလင်တွေကို နိုင်ငံသားအရည်အသွေးလျှော့ချဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ တရားမျှတမှုဘက်ရပ်ရင် ကောင်းမှာပါ။ သာသနာဖျက် မဖြစ်ပါစေနဲ့။
၅။ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ (၀ါ) ဠင်းတ အမှတ်(၅)
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းမှာ ပြည်မက ၀ါရင့်သံဃာတော်တွေ၊ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသံဃာတော်တွေနဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာ အစွန်းရောက်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အပြည့်အ၀ မထောက်ခံခဲ့ကြ ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့က ငါတို့ဆီမှာဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ပြည်မကိုကူးစက်စေရမည်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း မွန်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မိတ္ထီလာ၊ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းမှာဖြစ်တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေမှာ ၉၆၉ ဂိုဏ်းသားတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေရှိနေတာ အထင်အရှားတွေ့နေရပါတယ်။ တကယ်တော့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာပျက်စေတဲ့ ဠင်းတများသာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ထေရ၀ါဒ သာသနာဖျက်လုပ်ငန်းများကို လစ်လျူရှုနေသည့် သံဃာ့မဟာနာယကအဆင့်ဆင့်၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များ (၀ါ) ဠင်းတ အမှတ်(၆)
"ခေါင်းတုံးကာမျှဖြင့် ရဟန်းမည်သည်မဖြစ်၊ သီလအကျင့်၊ ဓုတင်အကျင့်လည်းမရှိသော ချွတ်ယွင်းသော စကားကိုလည်း ပြောတတ်သော၊ လိုချင်မက်မောမှုနှင့် ပြည့်စုံသောသူသည် အဘယ်မှာရဟန်း ဟုတ်နိုင်ပါအံ့နည်း၊" (ဓမ္မပဒ ၂၆၄)
"မကောင်းမှု၌ စိတ်ကိုမွေ့လျော်တတ်၍ ကောင်းမှုပြုသောအခါ၌ နုံ့နှေးနေတတ်ရကား မကောင်းမှုမှ စိတ်ကိုတားမြစ်၍ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို လျင်မြန်စောစွာ ပြုလုပ်ရာ၏။" (ဓမ္မပဒ ၁၁၆)
ကာလမရွာသားတို့အား မြတ်ဗုဒ္ဓက …
"ကြားယုံမျှဖြင့် လည်းကောင်း၊ အစဉ်အလာရှိပြီးသားဟုဆိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းဂန်ထဲမှာပါတယ် ဆိုယုံမျှဖြင့်လည်းကောင်း….တထစ်ချမမှတ်ယူနဲ့ဦး"ဟု မှာကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေဖြစ်နေတာကို သံဃမဟာနာယကအဆင့်ဆင့်ကလည်း မဟန့်ထားဘူး၊ အစိုးရကတော့ အားလုံးသေကြေပျက်စီးပြီးမှ ပုဒ်မ ၁၄၄ တို့၊ ကြေညာချက်တို့ ထုတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေကလည်း လူနည်းစုဒုက္ခရောက်နေရင် ၀င်မကူတဲ့အပြင် စာနာစကားတောင် ပြောဖော်မရ ကြဘူး။ အဲဒီလို အမျိုး ဘာသာ သာသနာ တည်တံ့ရေးဆိုပြီး သူတစ်ပါးအပေါ် အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်တာ၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ မဟုတ်သလို မတရားလုပ်နေတာကို မဟန့်တားဘဲ ငြိမ်နေတာလည်း ပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်သာသနာ ကိုယ် ဖျက်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာတရားတစ်ခုကဖျက်လိုက်လို့ အခြားဘာသာတစ်ခု ပျက်သွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုံးကမျှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်သာသနာ ကိုယ်ဖျက်နေကြတာပဲရှိပါတယ်။ မီဒီယာတွေ ကလည်း ၀ိုင်းလိမ်မပေးသင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၉၆၉ သင်္ကေတ၊ အယူဝါဒ တွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။ သင့်ကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ မပျက်ပါစေနှင့်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဠင်းတဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဠင်းတကို ကူညီသူမဖြစ်ပါ စေနဲ့။ ။
Posted: 02 Apr 2013 08:11 AM PDT
Posted: 02 Apr 2013 05:58 AM PDT
Posted: 02 Apr 2013 05:36 AM PDT
M-Media (English Version) Thirteen Children burnt to death at the burning of an Islamic Religious School in Yangon April 2, 2013 Thuta
Swardikiyah Islamic religious school, on 48th Street, Botathaung Township, was on fire this morning at 2:45 am, and 13 schoolchildren were burnt alive.
The school is located at No.181, 48th Street (Upper Block), Botathaung, and it is next toamosque. Overahundred students from all over the country study and memorize the Holy Qur'an there. Now, as the school is temporarily close, there were about 70 students only, and when the fire broke out, 55 of them could escape from fire, but unfortunately, 13 of them, who were under thirteen-year-old children, were burnt alive in fire.
The fire started around 2:45 and could be put out by 3:30. It was reported that the fire was claimed to be arson. It started first from the shoe-cabinet. When the students ran out on knowing the fire had broken out, the slipped on the staircase as it was wet with the petroleum oil, and they could sense the smell of it. The school wasatwo-storey building, and it was known that only inside the building was on fire.
M-Media could interview two 15-year-old students who had escaped from the burning: "Our school is two-storeyed. We didn't know that it was on fire at first. When we realized that the fire had spread. We ran down the staircase, and we slipped on the oil spilled on the floor. There are about 70 students in our school for the time being. Now (at the time of the interview) 51 students have escaped. The school didn't store any flammables like gasoline or petroleum. The fire started from the shoe cabinet. Our shirts still smell the gasoline now."
"I am now at the burnt place. Fire didn't catch the mosque, it was only inside the school. Three fire engines got here and put out fire. Children who were burnt were found together at one place. To my surprise, one of them didn't catch fire at all but died, and one more thing, as they all were supposed to be asleep in their bed, I cannot understand why they all were burnt to death at one place together. Now, the reason of the fire was told to be wire-shock. Indeed, it cannot be. I talked to people who live in that street, and they told me they heardaloud banging sound two hours before, but they didn't pay attention to where it came from. Later, they said they saw fire from the school, for that at first they thought it was only candlelight, and only sooner they learnt the school was on fire. Now the dead bodies have been taken to the hospital, and those who had escaped were put inacamp. I am sure it was not wire-shock, it was definitely arson", saidawitness from the fire-spot to M-Media.
Posted: 02 Apr 2013 04:26 AM PDT
While walking down the street one dayaMalaysian Boleh Minister is tragically hit byatruck and dies. His soul arrives in heaven and is met by an angel at the entrance.
Also present is the devil, who really isavery friendly guy who hasagood time dancing and telling jokes. They are having suchagood time that before he realizes it, it is time to go. Everyone gives himahearty farewell and waves while the elevator rises. The elevator goes up, up, up and the door reopens on heaven where the angel is waiting for him.
Posted: 02 Apr 2013 05:31 AM PDT
By Major (Rtd) Mohd Iskandar David Abdullah
When the government announced the formation of the Eastern Sabah Security Command (ESSCOM), I said to myself, "About bloody time!". I imagined security sectors formed from Kudat to Sandakan to Lahad Datu to Semporna and Tawau, mirroring what we used to have along the Malaysian-Thai border during the Communist insurgency such as Kota Alfa, Kota Bravo, Kota Charlie and Kota Delta spanning Kuala Perlis to Tumpat. The initial aim was to combat the communist guerrillas and stopping their infiltration from Southern Thailand. After the treaty in December 1989, we had elements of the Unit Pencegahan Penyeludupan (UPP) or the Anti-Smuggling Unit operating in these areas inasupporting role, to curb the smuggling of contrabands and also human trafficking.
Instead, I find it rather amusing when the Ketua Setiausaha Negara announced that Datuk Mohammad Mentek has been appointed as the Director of ESSCOM effective April 1st. What is wrong with this appointment? Mohammad Mentek is the Director of Immigration for the state of Sabah, the agency that, in my opinion, has failed badly in curbing the in-flow of illegal Filipino and Indonesian immigrants into that state.The New Straits Times ranastory on Mohammad Mentek's appointment andastatement by the KSN that was complemented by Mohammad's curriculum vitae; citing even that Mohammad would be very experienced in the field of security and public order.This April 1st appointment has to be an April's Fool joke with an extremely bad taste. Surely the KSN should know the functions of the Immigration Department like the back of his hand.
If I may provideamemory-jogger for all, the immigration Department's functions are:
If you think I made the above up, browse the immigration website.
How much of an expert do you think the Sabah Director of Immigration would be in the field of counter-insurgency warfare, joint-command operations and public order? Other than the pen being mightier than the sword, I doubt if the person's handled anything more than the butter knife, let alone deploy battalions of soldiers and policemen in combat situations.This is another example of the government missing out onagood opportunity to make things better. Obviously, the main concern when we talk about Sabah right now is its defence from foreign elements. With the heavy presence of our security forces there, we can only see illegal immigrants returning to their homeland, and not the other way round.
Therefore, the government should have hadaclear aim (again, quoting from the Principles of WAR) in ensuring its strategies in making Sabah more secure conform to this aim. A concept called Defence-in-Depth should have been adopted instead where the Army and Police's General Operations Force occupy the peripheral islands off Sabah, as being done in Ops PASIR, supported by the Navy, Marine Police and the Malaysian Maritime Enforcement Agency. These are the front-liners that will be meeting armed militants head-on. Onshore, defence and security should be effected by the Army and Police. The Immigration Department will just stick to its supporting role, weeding out illegal immigrants..
Therefore, in my opinion, the ESSCOM should be jointly-directed by the Deputy Commander of the Army's 1st Division, one of the deputies of the Commissioner of Police, Sabah, and the Malaysian Maritime Enforcement Agency's Head of Regional Enforcement for Sabah and Labuan. The reason is because they are in-charge of the combat and combat-capable units operating in this region, not the Immigration.In conclusion, the choice of the Director of Immigration for Sabah as the Director for ESSCOM isagrave mistake. I respect the person for who he is, but if the government wants to be seen serious in protecting the Malaysians in the state of Sabah, leave the job to the professionals. Not someone who holdsaMaster of Science (Statistics) degree andaBachelor of Science (Mathematics) degree from the University of Minnesota, United States.
A food for thought on 1st April 2013
Barack Obama brought enough Chicago-style community organizing to Israel that Benjamin Netanyahu knew what he would have to do. If he hoped to keep the tepid support of his country's essential but icy ally, Israel's prime minister would have to do what he'd spent nearly three years steadfastly refusing to do. Netanyahu would have to apologize toastate sponsor of terrorism that openly, notoriously, and enthusiastically supports Hamas. He would have to apologize to Turkey — to its prime minister, Recep Tayyip Erdogan, Obama's close friend and confidant. He would have to apologize for military action taken in his country's righteous defense against violent jihadists with close connections to Erdogan's ruling party and, seamlessly, to the Muslim Brotherhood, as well as al-Qaeda.
As I recount in Spring Fever: The Illusion of Islamic Democracy, the violent jihadists in question were from the grotesquely named "Humanitarian Relief Foundation" or IHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı). The IHH is an Islamic "charity" based and basted in the Islamic supremacism of Erdogan's Turkey. It is part of the Union of Good (sometimes referred to as the "Union for Good"),ajihadist umbrella enterprise that was designated by the United States government, during the Bush administration, as an international terrorist organization. Under the direction ofatop Muslim Brotherhood honcho, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, the Union of Good's main purpose is to transfer funds to Hamas, another designated terrorist organization. Besides being the Brotherhood's Palestinian branch, Hamas boasts Turkey, our NATO "ally," as its chief benefactor.
In late May 2010, IHH terrorists attempted to break Israel's lawful naval blockade of the Gaza Strip. The blockade is necessary to stem the flow of weapons to Hamas, Gaza's rulers having responded to Israel's painful peace offering — its withdrawal in 2005 from territory it had captured inawar of Arab aggression — by stepping up their terror campaign against the Jewish state. In seeking to break the blockade, an act of war, the IHH was willfully abetted by the Turkish government.
Israeli officials had pleaded with their Turkish counterparts to prevent the terrorists from embarking on their "peace flotilla." Members of Erdogan's government and party not only turnedadeaf ear; they sold the jihadists the offending vessel, the Mavi Marmara. They allowed the jihadists — armed with flares, night-vision goggles, 150 bulletproof vests, 200 gas masks, several dozen slingshots, 200 knives, 20 axes, 50 wooden clubs, 100 assorted iron bars, etc. — to board the ship without inspection. When the inevitable high-seas confrontation occurred, the Israeli Defense Forces tried to subdue the terrorists with paintball guns. The IDF resorted to lethal force only after being premeditatedly and savagely attacked — with several of its sailors seriously wounded. In that response, nine of the terrorists were killed.
Squeezed by Obama, Netanyahu would have to apologize for the killing of those terrorists. More often than not these last five years, Israel's prime minister has felt President Obama's heel on the back of his neck. In stark contrast, Turkey's prime minister has enjoyed Obama's warm embrace. In Ankara, Erdogan hosts the leaders of Hamas and Hezbollah as foreign dignitaries. He accuses Israel of turning Gaza intoa"concentration camp." Only days before Netanyahu's coerced apology, Erdogan — whose history of anti-Semitism is infamous — publicly pronounced that Zionism isa"crime against humanity."
This heinous accusation, "crime against humanity," has become something ofaverbal tic with Erdogan. He cavalierly applies it to Israel's self-defense from thousands of jihadist rockets fired into its territory, and to the suggestion by European governments that the millions of Muslims who've immigrated to the West ought to assimilate into their new societies. Nevertheless, Obama openly regards Erdogan as one of his most trusted partners on the world stage. "The bottom line is that we find ourselves in frequent agreement uponawide range of issues," said Obama of Erdogan in March 2012, upon seeking him out ataSouth Korea summit for advice on the crisis in Syria, the tumult in Egypt, the nukes in Iran — even the challenges of raising daughters. With Obama on the phone egging him on, Netanyahu abased himself. Not only did he apologize to Turkey, he further capitulated to Erdogan's demand that Israel pay compensation to the Mavi Marmara "victims."
After the apology, Erdogan briefed his Hamas confederates and announced he would be visiting them in Gaza next month. Predictably, he has since announced that Netanyahu's humiliating act of contrition will not be sufficient to restore diplomatic relations between the two nations. Just as predictably, other Islamic states are now preparing demands for apologies and compensation for sundry exercises of Israeli self-defense against jihadist terror. National Review
Over at Gatestone Institute via RaymondIbrahim.com
The 2013 year began with reports indicating that wherever Christians live side by side with large numbers of Muslims, they are under attack. One report said that "Africa, where Christianity spread fastest during the past century, now is the region where oppression of Christians is spreading fastest." This is certainly true: whether in Kenya, Nigeria, Mali, Somalia, Sudan, or Tanzania, attacks on Christians in those countries are as frequent as they are graphic. As for the Middle East, the cradle of Christianity,anew study by the Pew Forum finds that "just 0.6 percent of the world's 2.2 billion Christians now live in the Middle East and North Africa. Christians make up only 4% of the region's inhabitants, drastically down from 20%acentury ago and marking the smallest regional Christian minority in the world. Fully 93% of the region is Muslim, and 1.6% is Jewish."
Continue reading for the complete report, which is divided by theme of persecution.
Posted: 02 Apr 2013 05:38 AM PDT
Posted: 02 Apr 2013 02:56 AM PDT
Moon & Star 24-7 News Channel
ဝါယာရှော့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့ ထရန်စဖော်မာ
Posted: 02 Apr 2013 12:38 AM PDT
Who is behind 969 Neo-Nazi Movement leader skin-head monk Wira Thu?
Credit to maung zarni
President office Director Hmuu Zaw is regularly sharing from 969 Neo-Nazi Movement leader skin-head monk Wira Thu's FB
Posted: 02 Apr 2013 02:33 AM PDT
Posted: 01 Apr 2013 11:29 PM PDT
A few months ago, I boughtapacket of chia seeds after the sales girl explained its benefits. Frankly, I was not convinced and did not even open the packet which I carefully kept inacontainer sitting in my kitchen cabinet, However, after reading the following article, I am going to start eating it daily.
That'saquestion with many answers, and one such answer is chia seeds. Chia seeds areatraditional food in central and south America and, yes, these are the same seeds known for the association with the Chia Pet. But more than an answer to ceramic statue baldness, chia seeds are very nutritious and loaded with omega3and6fatty acids.
Chia seeds can be eaten alone or added to smoothies, protein shakes, yogurt, cereal, salads, and so on. They haveavery mild flavor that is slightly nutty but mostly neutral. When they're hydrated or mixed with water they formaclear gel consistency. Some people arealittle skeptical at first but relax, the flavor is benign, almost tasteless. Nutritionally, however, chia seeds and chia gel is rich in protein and amino acids.